Ngaba i powder Orlistat ekhuselekile kwaye isebenzayo? | AASraw
/Blog/Orlistat/Ngaba i-Olistat ipowder ekhuselekile kwaye isebenzayo?
ezaposwa ngomhla 11 / 17 / 2017 by UDkt Patrick Young bha liweyo Orlistat.
Yintoni i I-Orlistat powder?
I-Orlistat powder iyinkunkuma Ukulahlekelwa ngamatye, uvimba ezinye iinqatha ozidlayo, uzigcine ungabandakanywa ngumzimba wakho. I-Orlistat isetyenziselwa kunye nokunciphisa i-calorie yokutya kunye nokunyusa ukunyusa ukunyamezela kubantu abanomngcipheko othile (ezifana nesifo sikashukela, igazi eliphezulu uxinzelelo, kunye ne-cholesterol ephezulu okanye i-triglycerides) .Abantu ngokuqhelekileyo uthenge i-Orlistat i-fat burner eyenziwa kakuhle.
Ngaba i-Orlistat ipowder ekhuselekile?
I-Orlistat powder iyinqobo ye-nature inhibitor ye-pancreatic lipases ehlukeneyo kwi-british Streptomyces toxytricini, ingowesigaba sezilwanyana ezibizwa ngokuba yi-lipase inhibitors, Akusebenzi ngokuchaphazela i-nerve yakho ye-Sensory, kodwa ibimbela amathumbu athatyayo malunga ne-25% yamanqatha oyidlayo . Amafutha angafakiyo aphume emzimbeni wakho ngokusebenzisa ukunyakaza kwamathumbu. ezinemiphumo engaphantsi kwemihla ekuthelekiswa nezinye iimveliso zokulahlekelwa kweoli, yikho nto ithandwa kakhulu kubantu.Ngaphezu koko, kunamanye amancedo, enye idatha ibonisa ukuba i-Olistat inceda ukunciphisa inani leyona nto inobungozi be-fatly called fat fat, edibeneyo kunye nohlobo lwe-2 yesifo sikashukela, uxinzelelo lwegazi oluphezulu, isifo senhliziyo, kunye nesifo.
Ngaba i-Orlistat ipowder esebenzayo?
Kwimizuzu yesilingo yesilingo, umyinge ukulahleka kwesisindo somzimba yayingu-50 ipesenti kunye ne-Orlistat xa kuthelekiswa ne-placebo kunye nokutya. Oku kuthetha ukuba ukuba ulahlekelwa yi-6 kg ngokutya kuphela, unokulahlekelwa yi-9 kg kunye ne-Orlistat. Ukongezelela, kuboniswe ukuba abo bathatha iPowlistat powder bagcina ukulahlekelwa kwesisindo ngaphezu kweqela le-placebo. Ukuze usebenze ngokugqithiseleyo kwe-Orlistat, i-capsule enye ithathwa ngesondlo ngasinye esisisiseko (ubuninzi beepsulules ezintathu ngosuku) ngaphambi, ngexesha, okanye ukuya kwiyure enye emva kwesidlo ngasinye. Ukuba uphoswa isidlo okanye isidlo asiququli nayiphi na inqatha, akudingeki ukuba uthathe i-capsule.
Ngaba i-Orlistat powder Ilungelo kum?
Kwiminyaka yakutshanje, ukunyaniseka kusengumngeni phakathi kwehlabathi lonke.Thatha iMelika njengomzekelo. Ipesenteji yabantu abagqithisileyo e-US sele iphindwe kabini-ukusuka kwi-15 yeepesenti ukuya kuma-32 ekhulwini-kwiminyaka emibini edlulileyo. Ukucima loo mapaundi angafuneki, abathengi basebenzisa iibhiliyoni zeedola ngonyaka kwimveliso yokulahlekelwa kwesisindo.Ngako ukuba unamandla kakhulu, kunye nokutya kunye nokuzivocavoca akuzange sikusebenzele, xela ugqirha malunga neprogram yokulawulwa kwisisindo equka imithi. Zama ukusebenzisa i-orlistat powder, kodwa khumbula, kufuneka ulandele indlela yokuphila enempilo ebandakanya ukuzivocavoca rhoqo nokutya ngokufanelekileyo.
Izilumkiso ukuthatha i-Orlistat powder
Unokwazi ukubona ioli kwiindawo zakho zokuhamba ezinyangeni ezimbalwa zokuqala zokuthatha i-Orlistat, engenabungozi kwaye ngenxa yokugqitywa kwamafutha angapheliyo. Oku kunokwenzeka oku kwenzekayo kwandiswe emva kokudla ukutya okuphezulu kwioli.
Ukulahlekelwa kwesisindo kunokuchaphazela umyinge we-orlistat uthathe ukunyanga ezinye iimeko ezifana neswekile okanye i-cholesterol ephezulu.
Ungathathi i-Orlistat powder xa ukhulelwe, ukuncelisa, ukuguqula i-powder orlistat okanye ezinye izithako eziqulethwe.
I-Orlistat powder ayifanelekanga kwizigulane ezinokugula okungapheliyo kwe-malabsorption syndrome okanye i-cholestasis.
Kunconywa ukuba usebenzise indlela eyongezelelweyo yokukhusela njengento yokuqapha ukuba usebenzisa okwenzela ukukhulelwa ngomlomo ukukhusela ukungaphumeleli kwimeko yokukhulelwa komzimba.
I-Orlistat powder ingashintsha umsebenzi wamanye amayeza ngoko kubalulekile ukuxelela ugqirha wakho nawaphi na amayeza osetyenziswayo ngoku.
tags: uthenge i-Olistat powder, Olistat powder
Yonke into omele uyazi ngayo malunga ne-Orlistat powder yokulahleka kweoli
Kuphi ukuthenga ubungcwele obuphezulu be-Dianabol powder? Imilinganiselo yeHGH: Indlela yokukhetha i dose yeHGH ngokufanelekileyo?